फेरि बढ्यो सबै देशको मूल्य, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
बुधबार असोज १५, २०७६/ Wednesday 10-02-19
काठमाडौं - बुधबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित धेरैजसो सबै देशको मूल्य बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै आज एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ ।
सोमबार दुई अर्बको ट्रेजरी जरी बिल बिक्री हुने
अमेरिकी डलरसहित केही देशको भाउ बढ्यो कि घट्यो ? हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर